Ekubeni okokuqala kwaziswa kwiminyaka engaphezu kwamashumi amabini edlulileyo, i-WordPress ikhulile (kwaye ikhulile) ngoku ngoku kuthiwa ikhutshwe njenge – δημοφιλές σύστημα διαχείρισης συστημάτων στον κόσμο. Namhlanje, ngaphezu kwekota iiwebhusayithi ezikhoyo ziqhutywa kwi-WordPress.
Kodwa ukususela ngexesha elidlulileyo, σε eyaziwayo kakhulu kukuba, abantu baninzi bafuna ukunyusa kwiindlela ezingenanto. Jonga nje kwi-Microsoft Windows kunye inani elikhulu le-malware, ii-virus nezinye izinto yenzelwe ukujolisa nje kule nkqubo eyodwa yokusebenza.
Iingxelo ze-10 WordPress ezininzi ezixhatshazwayo (umthombo). Uphando kwi-2017 ichonge iinguqu ze-74 ezahlukileyo ze-WordPress kwiwebhusayithi ye-Alexa Κορυφή 1 yezigidi; I-11 yale miqulu ayivumelekanga – umzekelo 6.6.6 (umthombo).
2.1 7. Khusela i-κατάλογος yakho ye-wp-admin
2.3 9. Δίκτυο διανομής Sebenzisa iNetwork (CDN)
3.1 Τελικός Iingcinga
Ναζί izicwangciso ze-10 zokhuseleko ongazenzayo.
Ukukhusela iphepha lakho lokungena alikwazi ukufezwa yiphina inye in ethile, kodwa ngokuqinisekileyo kukho amanyathelo kwaye iifowuni zokhuseleko unokuthatha ukuze wenze naluphi na ukuhlaselwa okuncinci ukuphumelela.
Iphepha lakho lokungena lewebhusayithi ngokuqinisekileyo lelinye lamaphepha asengozini kakhulu kwiwebhusayithi yakho, ngoko ke masiqalise ukwenza iphepha لاکھo lokungena le-WordPress libe likhuselekile kancinane.
Sebenzisa amagama abasebenzisi angaqhelekanga. Ngaphambili ngeWordPress, bekufuneka uqale usebenzise igama lomsebenzisi elisisiseko, kodwa oko akusekho njalo. Okwangoku, uninzi lwabameli abatsha bewebhu basebenzisa igama lomsebenzisi elingagqibekanga kwaye kufuneka bathintshe igama labo lomsebenzisi. Ungasebenzisa Ulawulo lweRamamer lwandisiwe ukutshintsha igama lomsebenzisi lomlawuli.
Ukunyanzeliswa kwamaphepha okungena kungenye yeendlela eziqhelekileyo zokuhlaselwa kwewebhu iwebhusayithi yakho inokuthi ijongane nayo. Ukuba unokwazi ukuqagela igama eligithisiweyo okanye igama lomsebenzisi, iwebhusayithi yakho ngokuqinisekileyo ayizukuba kukujolisa kuphela kodwa ekugqibeleni ibe lixhoba. Ukusuka kumava, uninzi lweendawo zokuzama ukukhangela izame ukungena kunye nokhetho oluphambili lwamagama abasebenzisi. Ezi zibini zokuqala zihlala ‘zilawulwa’ okanye ‘ngumlawuli’, ngelixa eyesithathu ihlala isekwe kwigama lakho lesizinda.
Ngokomzekelo, ukuba isayithi lakho liyi-crazymonkey33.com, umnqwenga angazama ukungena ngemvume nge «crazymonkey33».
Ngoku ungacinga ukuba abantu baya kukwazi ukusebenzisa iiphasiwedi ezinamandla, ezinzima ukukhusela i-akhawunti yabo, kodwa kukho abaninzi abanokucinga ukuba «iphasiwedi» enkulu.
Iphasiwedi eqinileyo iya kubandakanya umxube εμείς:
I-RecCaptcha yenzelwe ukuyeka izixhobo zokusebenza ngokusebenza kwisayithi. Προβατίνα, kunikezelwa ubunzima bokusetyenziswa kwezixhobo namhlanje, ezi zinokugqithiswa ngokulula, kodwa ubuncinci kukho olo lukhuseleko olongezelelweyo.
Nazi inani leeplagiza zeReCaptcha ongayisebenzisa kunye nokufakela kwakho okuya kusebenza kakhulu ehokisini.
Le yindlela enye elula ngokulula ukuyeka ukuhlaselwa ngamandla kwiphepha لاکھo lokungena kwiindawo zazo. Uhlaselo olunamandla olushushu lusebenza ngokuzama ukufumana igama lakho lomsebenzisi kunye nephasiwedi ngokufanelekileyo ngokuzama ukudibanisa ezininzi ngokuphindaphindiweyo.
Είσοδος LockDown kwaye Λύση Ασφάλεια Λύση Zombini zinikezela ngezisombululo ezinkulu zokukhusela iphepha lakho lokungena kwiwebhusayithi. Balandela iidilesi ze-IP kwaye banciphisa inani lokuzama ukungena ukukhusela iwebhusayithi yakho.
Sithethe ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela iphepha لاکھo lokungena kwi-WordPress – lawo manyathelo akhankanywe apha ngasentla ziziseko ongayenza. Kuya kufuneka wazi ukuba ezinye ii-web host ziyakuyalela ezinye zezi ndlela zokhuseleko kubasebenzisi bazo. Kukho inani lezinye izinto zokhuseleko onokuzisebenzisa kwiisayithi zakho.
7. Khusela i-κατάλογος yakho ye-wp-admin
Ukwenza njalo, uzakufuneka ungene ngemvume kwipaneli yokulawula i-akhawunti yakho. Ingaba usebenzisa cPanel ή Plesk, ukhetho o lukhangelayo «Iphasiwedi-khusela izalathisi»
Uxhumano lweHTTP εναντίον HTTPS (Umthombo: Sucuri)
Ngaphandle kwalokhu, kusemgangathweni ukuphumeza i-SSL ngoku ekubeni iinjongo zokukhangela ziyaqhubeka ziphosa amasayithi abawajonga ngokuthi «aphephile».
9. Δίκτυο διανομής Sebenzisa iNetwork (CDN)
Χάκερς phantse bafune ukusizakala ngobuthakathaka kunye nokuxhaphazwa okuyaziwayo okushiywe kungafihliwe kumane kucele inkathazo. Oku kuhamba ngokuphindwe kabini kwiiplagi ezivame ukudala ngamakhampani amancinci anezixhobo ezincinci.
Πρόσθετα πρόσθετα Ukuba usebenzisa ii, qinisekisa ukuba uhlaziyo lukhutshwa rhoqo, okanye uqwalasele ukufumana iiplagi.
Ngokuqhelekileyo umncedisi wakho wewebhu uza kuza kunye nezinye izinto ezisisiseko zokugcina, kodwa ukuba ungeyonto efana nam, qho qinisekisa ukuba wenza iifayile zakho ezizimeleyo. Ukuxhaswa akulula nje nje ukukopisha ezinye iifayile, kodwa qwalasela ingcaciso kwi-βάση δεδομένων yakho.
Khangela isisombululo sokukhusela esilungileyo kwaye savunywa. Nokuba utyalo-mali oluncinci lufanelekile ukuba ulondoloze ngezinyembezi kwimeko yengxamiseko. Into efana BackupBuddy Unokukunceda ukugcina yonke στο equka isiseko sakho kwiziko elilodwa.
Nanku apho σε efana nayo LweNanja Security kungena, okukunceda uhlole indawo yakho ngenxa yobuthathaka.
Okokuqala, yigijime kwiwebhusayithi yakho «njengokuba» – ngaphambi kokwenza nayiphi iinguqulelo. Vumela i-plugin ipake kwaye iqhube isayithi lakho ngaphambi kokuba ikunike iziphumo.
Emva koko kusekelwe kwezo ziphumo, sebenzela ukufumana indawo yakho. Ukhuseleko lwe-Ninja lwenza ngaphezulu kweemvavanyo ze-50 ukuhlola ubungqina bakho. Nangona emva kokuba wenze utshintsho lwakho, ligijime kwakhona (kunye naliphi ixesha kukho utshintsho lwesayithi okanye i-plugin ενημερώσεις) ukuvavanya indawo yakho.
Ukuba le nto ithetha njengomsebenzi omncinci kakhulu kuwe, i-Security Ninja iphinda ifikelele iimodyuli ezongeziweyo (pro version, indawo enye ye-29) enokukunceda ukulungisa iingxaki ezifumanekayo.
Ukunqanda i-IP ye-IPM emibi eyi-juta eqokelelwa kwizigidi zeendawo ezihlaselwe
Khusela ifowuni yokungena kwi-brute-force επίθεση
Nangona zonke ezi zinto zingabonakala zigqithiseleyo kumsebenzisi oqhelekileyo we-WordPress, ndiqinisekisa ukuba yonke σε (kunye nokunye) iyimfuneko. Ukungaziboni iinkcukacha ze-hack emhlabeni wonke kwaye ungenzi ixesha elithile, ndivumele ukwabelana nawe ngolwazi oluthile kwiziko ezininzi ezifihlakeleyo ndinceda ukulawula.
Ekuqaleni kwaqala njengendawo elula ye-βιογραφία, ndadala www.timothyshim.com. Kucacile ukuba, yinto nje endinokumisela kwaye ininzi yexesha ihamba yodwa, nje ngeyona nkcazelo. Ngexesha elide leenyanga, kwesi siza ayenzi nto kwaye ayiqokeleli idatha, ubhekane nokuhlaselwa kwe-30 – inhlanganisela yamandla enqabileyo kunye neyinkimbinkimbi.